Farmaajo oo soo laba kacleeyay shir jaraa’idna ku qabtay magaalada Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo oo soo laba kacleeyay shir jaraa’idna ku qabtay magaalada Muqdisho (DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG aheyd ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa soo laba kaclaayeey, isagoona shaaca ka qaaday waxyaabaha uu uga duwan yahay musharixiinta kale ee kula tartameeysa doorashada.
Maxamed C/laahi Farmaajo oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in shaqsi ahaan lagu tilmaamo musharaxa shacabka, islamarkaana hadii uu xilka ku guuleysto sameyn doonno waxyaabo ka duwan musharixiinta kale.
Wuxuu Farmaajo sheegay inuu doonayo in shacabka usoo celiyo awoodda, islamarkaana isku xiro dowladda iyo shacabka, oo xilligaan aysan jirin wax xiriir ah oo dhinacyadaasi ka dhaxeeya.
Dhinaca kale, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa dowladihii dalka soo maray ku eedeeyay inaysan ka war qabin shacabka, isagoo balan qaaday bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, wuxuu Farmaajo ammaanay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo laalay miisaaniyada seddexda bilood oo ay wasaaradda maaliyadda usoo gudbisay, isagoona go’aankooda ku sheegay inuu ahaaa mid sax ah.